बार्सिलोना छोड्न तयार मेस्सीलाई कसले लैजाला ? – Naya Kura Daily
बार्सिलोना छोड्न तयार मेस्सीलाई कसले लैजाला ?
August 26, 2020 201
बार्सिलोनाका पर्यायका रुपमा हेरिन्छन् मेस्सी । मेस्सी बिनाको बार्सिलोनाको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् फ्यानहरु । अहिले उनीहरुबीच विभिन्न प्रश्नोत्तर र अड्कलवाजीहरु भइरहेका छन् । किन छाड्न लागे मेस्सीले बार्सिलोना ? अब कुन क्लबमा जान्छन् ? के बार्सिलोनाले मेसीलाई रिलिज गर्ला ? कुन–कुन क्लब छन् मेसीलाई नजर लगाउने ? मेस्सीलाई ७०० मिलयन युरो तिर्न सक्ने क्लब कुन होला ? यस्तै यस्तै ।
यसरी जुन क्लवमा खेलेर सफलताको शिखर चुमे त्यही क्लवलाई किन बाईबाई गर्न चाहन्छन् त मेस्सी ? अहिले सबैको मनमा उब्जेको प्रमुख कौतुहलता यही नै हो ।
अबको एउटा प्रश्न छ, के उनले यही समरमा जसरी पनि क्लब छाड्लान् ? यदि मेस्सीले बार्सिलोना छाडे भने कुन क्लबमा जालान् ? उनको पूर्व प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला रहेको म्यानचेष्टर सिटी उनलाई ताकिरहेको छ । यस्तै पछिल्लो समय इन्टर मिलानले पनि मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्न चाहेको समाचार बारम्बार आइरहेको छ । इंग्लयाण्डकै म्यानचेष्टर युनाइटेड समेत मेसीलाई अनुबन्ध गर्ने रेसमा अघि देखिएको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
गोल डट कमले पीएसजीका लागि किन मेस्सी खराब अनुबन्ध हुन्छ ? शीर्षकमा एउटा सामग्री तयार पारेको छ । यो अचम्म सुनिन सक्छ तर विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्नु पीएसजीका लागि खराब हुन सक्ने तर्क त्यसमा गरिएको छ ।
Prevभिडमा कसरी कोरोना फैलिन सक्छ भन्ने थाहा पाउन जर्मनीमा साङ्गीतिक कार्यक्रम
Nextबाबु गुमाएको २० दिनपछि कोरोना संक्रमणबाट छोरीको मृत्यु
लेबनानमा २७ सय ५० टनको एमोनियम नाइट्रेड बिस्फोट, ७० को मृत्यु, ४ हजार बढी घाइते (भिडियाे)
बैबाहिक जीवनबाट अलग भए सुधांशु र उषा